Amnesty International: Dawladu waa inay sameysaa baaritaan deg deg ah, Dilkii fanaanka oromada ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Amnesty International: Dawladu waa inay sameysaa baaritaan deg deg ah, Dilkii fanaanka...
Amnesty International: Dawladu waa inay sameysaa baaritaan deg deg ah, Dilkii fanaanka oromada ah
Hay’ada Itobiya waa inay sameysaa baaritaan deg deg ah, dhexdhexaad ah, madax banaan oo wax ku ool ah oo ku aadan dilkii fanaankii caanka ahaa ee reer Mareykan Hachalu Hundesa, isla markaana cadaalada la horkeeno qof walboo lagu tuhmayo inuu masuul ka yahay, Amnesty International ayaa sheegtay maanta markii ay mudaaharaadyo ka bilaabeen dilkiisa. dhowr qaybood oo dalka ah.
“Waa inuu jiraa cadaalad dilkii Hachalu Hundesa. dilkii heesaga wuxuu ku kicinayeen dhalinyarada waddanka mudaharaadyo isdaba joog ah laga soo bilaabo 2015 taasoo horseedaysa dib u habaynta siyaasadeed ee lagu arkay dalka ilaa iyo 2018, ”ayay tiri Sarah Jackson, Kuxigeenka Agaasimayaasha Gobolka ee Amnesty International ee Bariga Afrika, Geeska iyo The Great Lakes.
“Saraakiishu waxay fureen baaritaan ku saabsan dilkiisa waana inay hadda hubiyaan inay tahay mid dhakhso leh, dhexdhexaad ah, madax-bannaan oo wax ku ool ah isla markaana cadaaladda la horkeeni doono caddaaladda kuwa lagu tuhmayo inay mas’uul ka yihiin,” ayay tiri Sarah Jackson.
Xiritaanka baraha internetka ah oo ay xukumaddu xireen ilaa subaxnimadii hore waxay adkeysay in la xaqiijiyo warbixinnada dadka lagu dilay mudaaharaadyada socda.
“Mas’uuliyiinta ayaa ah inay si dhaqso leh u qaadaan xiritaanka internet-ka bustaha oo dhan oo ay dadka u oggolaadaan inay helaan macluumaadka ayna si xor ah ugu baroortaan fannaanank la diley” ayay tiri Sarah Jackson.
Amnesty International waxay sidoo kale ugu baaqeysaa ciidamada amniga inay xakameeyaan markii ay maareeyaan dibadbaxyada socda ayna ka fogaadaan adeegsiga xoogga xad dhaafka ah.
waa kuma hajaalu huundeesa
Hachalu Hundesa, oo caan ku ahaa heesahiisa siyaasiga ah, ayaa la toogtay abaare 9:30 galabnimo ee 29ka Juun agagaarka Gelan Condominium ee Addis Ababa. Waxaa loo qaaday cisbitaal u dhaw, halkaas oo loogu sheegay inuu dhintay waxyar kadib markuu yimid.
22kii Juunyo, Hachalu Hundesa waxaa lagu wareystay shabakadda ‘Oromo Media Network’ (OMN) halkaas oo uu kaga hadlay arrimo badan oo is khilaafsan oo ka dhashay carada shacabka ee aaladaha warbaahinta bulshada.
Sida laga soo xigtay Addis Standard, oo ah wargeys heer qaran ah, Taliyaha Komishanka Bilayska Addis Ababa, Getu Argaw, wuxuu sheegay in booliisku ay billaabeen baaritaan isla markaana ay hayaan “qaar tuhmanayaal” ah oo ku jira xabsiga bilayska.
Waxaa kordhay dilalka loo geysanayo dadka dhaleeceeya dowladda iyo shakhsiyaadka siyaasadeed ee dalka tan iyo 2019. Kuwaas waxaa ka mid ah dilkii Madaxweynaha Gobolka Amxaarada, Ambachew Mekonnen, iyo labo kale oo sare oo heer gobol ah 23kii Juun 2019. Isla maalintaas , Janaraal Seare Mekonnen, Abaanduulaha Ciidamada Militariga Itoobiya ayaa lagu dilay gurigiisa oo ku yaal Addis Ababa isaga iyo askariga howlgab ah Major General Gezai Abera. 3dii Juun 2020 Bekele Bidra, oo ahaa madaxa jabhadda Oromo Liberation Front (OLF) ee Bole Sub-City ee Addis Ababa ayaa lagu dilay gaarigiisa.
Warbixintii ugu dambaysay ee Amnesty International, ‘oo ka baxsan fulinta sharciga: xad-gudubyada xuquuqda aadanaha ee ay sameeyeen ciidamada nabadgelyada ee Amxaarada iyo Amxaarada,’ waxay muujineysaa xasuuqii ka dhacay Itoobiya waxayna ku baaqday isla xisaabtan iyo cadaalad.
Previous articleWararkii ugu danbeeyey dilkii fanaanka oromada ahaa iyo dhimashii oo mareyso 10qof
Next article50 qof ayaa ku dhintey mudaaharaadyo kadhacay wadanka Itobiya
Qarax Ciidamo Ka Tirsan Dowladda Soomaaliya Lala Eegtay
DEG DEG: Nin hubeysan oo toogasho ka billaabay magaalada Utrecht ee...